ကုန်းလိုက်ချင်သည် | CeleTrend
မမကို အရမ်းချစ်တာဘဲ မမရယ် အော်.. မောင်လေးရယ် မမလဲ မောင်လေးကို အရမ်းချစ်တယ် သိလား တကယ်နော် အော်.. မောင်လေးရယ် တကယ်မို့လို့ မောင်လေးကို မမရဲ့ တကိုယ်လုံး လိုရာသုံးဖို့ ပုံအပ်ထားတာပေါ့ကွယ်.. ဒါပေမယ့်.. မမရယ် မောင်လေးလေ.. အခုလို တပတ်တခါလိုးရတာကို အားမရဘူးသိလား.. မမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အမြဲတမ်းလိုးချင်နေတာသိလား ဖြစ်လာမှာပေါ့ မောင်လေးရယ်.. အခုလည်း တပတ်တခါမကတော့ဘူး.. မောင်လေးလိုးချင်တဲ့ အချိန်တိုင်း မမအမြဲတမ်း အလိုးခံနေတာဘဲ မဟုတ်ဘူးလား မမရဲ့ဟောဒီ ချစ်ချင်စရာ ညှစ်ချင်စရာ ကိုယ်ခန္ဓာနူးညံ့အိကြီးနဲ့ လိုးချင်စရာ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလေ မောင်လေးက အမြဲတမ်းချစ်ချင် ညှစ်ချင် လိုးချင်နေတာ သိလား..၊ အခုတောင်မှ ထပ်ပြီးလိုးချင်လာပြန်ပြီ ဟုတ်လို့လား မောင်လေးရာ.. မမမှာဖြင့် မောင်လေးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလိုးထားလို့ စောက်ဖုတ်ကြီးတောင် ကျိန်းနေပြီ.. အော်.. မမရယ် မောင်လေးဖြင့် ဟောဒီမမစောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးလို့မ၀သေးဘူး.. မယုံရင် မောင်လေးလီးကို မမကိုင်ကြည့်ပါလား.. အိုး.. ဟုတ်ပါရဲ့ မောင်လေးရာ.. မောင်လေးလီးကြီးက ထောင်ထနေတာလွန်ရောပဲအဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ မမရဲ့.. မမကိုတွေ့ရင် မောင်လေးတင်မကဘူး.. မမကို တွေ့တဲ့သူတွေ ဒိပြင်လူတွေကပါ ဖြုတ်ချင်နေတာ.. သိလားအဲဒါတော့ ပိုပြီကွယ်မပိုပါဘူး မရယ်.. မောင်လေးသူငယ်ချင်းတွေကဆိုရင် မင်းမမကို တခါလောက်ဆွဲရရင် ကောင်းမှာဘဲလို့တောင် ပြောကြတယ် မင်းကလျှောက်ပြောတယ်ပေါ့လေ ကောင်စုတ်လေးမကိုလိုးခွင့်ရတာကိုက မောင်လေးအတွက် အခွင့်ထူးပဲလေ.. ဒါကြောင့် မောင်လေးကြွားမိတာပေါ့အင်းပါ ကြွားတာလဲကြွားပေါ့.. မမမှာ မောင်လေးရဲ့ လီးဒဏ်ကိုခံရတာတောင် မလွယ်တာ.. ဒိပြင်ကောင်တွေရဲ့ ဒုတ်တွေကို ခံနိုင်ပါ့လဲမလား မသိဘူးကွ လွယ်ပါတယ် မမရယ်.. စောက်ဖုတ်ဆိုတာ ဘယ်လီးမဆိုခံနိုင်ပါတယ်.. မယုံရင် မောင်လေးလက်တွေ့ပြမယ်လေ မောင်လေးရယ် မမကတစိမ်းကောင်တွေကို ကုန်းရမှာလားဟယ်..ဟေ့အေး ပြောနဲ့တော့ကွယ်သည်စကားများမှာ အေးအေးဝင်းနှင့် ရဲကျော်တို့၏ တီတီတာတာပြောနေသော စကားသံများပင်ဖြစ်သည်။
အေးအေးဝင်းနှင့် ရဲကျော်တို့နှစ်ဦးစလုံးမှာ အိပ်ခန်းတခုအတွင်းရှိ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် ရှိနေပြီး နှစ်ဦးစလုံးမှာ အဝတ်အစားဟူသမျှ လုံးဝမရှိဘဲဖြစ်နေကြသည်။ ဤအိပ်ခန်းမှာ အေးအေးဝင်းနေထိုင်ရာ အိမ်ထဲမှာရှိသော အိပ်ခန်းကြီးဖြစ်ပြီး တအိမ်လုံးတွင် အေးအေးဝင်းတယောက်တည်းနေထိုင်ကာ ရဲကျော်လာမှ ရဲကျော်နှင့် အတူအိပ်သော အခန်းဖြစ်သည်။ ယခုလည်း စောစောက၂ချီဆက်တိုက်လိုးပြီးဖြစ်၍ နှစ်ဦးစလုံး၏ ကိုယ်ခန္ဓာများတွင် ချွေးစကလေးများက တွဲခိုနေကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမှာ တဦးကို တဦးဖက်လျှက် ဘေးစောင်းအ်ိပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲကျော်က အိပ်နေရင်းမှ သူ၏လက်များကို အေးအေးဝင်း၏နို့အုံများပေါ်တွင်တင်ပြီး ကိုင်တွယ်ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ ရဲခိုင်ကကိုင်ခိုင်း၍ အေးအေးဝင်းကိုင်လိုက်သော ရဲကျော်၏လီးတန်ကြီးမှာ မာတောင်ထနေပြီး စောစောကလိုးထားသဖြင့် ပေပွနေသော စောက်ရည်များ သုတ်ရည်များကြောင့် ရွှဲပြောင်နေလေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ ရဲကျော်ကိုင်ခိုင်း၍သာ ကိုင်လိုက်ရသော်လည်း လီးတန်ကြီးဆီမှ မမြင်ရသော ဆွဲငင်အားတခုကြောင့် ပြန်မလွှတ်ဘဲနေသည့်အပြင် လီးတန်ကြီးကို မလွတ်တမ်း တင်းတင်းကိုင်ထားပြီး အထက်အောက်လည်း လှုပ်ရှားရင်း ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိသည်။ သူမ၏ ရင်ထဲမှာလည်း ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးအား ကိုင်ထားရသည်ကို အားရကျေနပ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရဲကျော် နောက်တချီချလျှင် ခံနိုင်ရန်အတွက် သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖောင်းကြွလျှက် စိတ်ထလာပြီဖြစ်သည်။ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှာတော့ တစတစ မရိုးမရွဖြစ်လာကာ စောက်ရည်များလည်း စိမ့်ထွက်လာပြီဖြစ်သည်။ အေးအေးဝင်းမှာ အထက်တန်းပြဆရာမတဦးဖြစ်သည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ဆရာမအလုပ်ကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျက် စာပေးစာယူဖြင့် ဘွဲ့ရကာ ဘီအီးဒီတက်၍ တဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်လာပြီး အထက်တန်းပြဆရာမဖြစ်လာရသူဖြစ်သည်။ သူမမှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတလုံးရှိကာ တယောက်တည်း အေးဆေးစွာနေသူလည်းဖြစ်သည်။ အသက်မှာ ၂၈ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သဖြင့် အပျိုကြီးဘဝသို့ ရောက်လုနီးပါးဖြစ်သည်။ အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်ခနာမှာလည်း ကျားသတ္တဝါတို့ စွဲမက်စေလောက်သည်။ အဝေ့အဝိုက်၊ အဖုအထစ်၊ အမို့မောက်စသည့် ကောက်ကြောင်းတွေက သူ့နေရာနှင့်သူ အဆင်ပြေစွာ ကြည့်ကောင်းအောင် ပြည့်စုံလျှက်ရှိလေသည်။ ဒါကလည်း အခုအသက်အရွယ်အထိ မည်သူနှင့်မျှ သမီးရည်းစားမဖြစ်ခဲ့ဘဲ ထိန်းသိမ်းလျှက် စာသင်သည့်လုပ်ငန်းတွင်သာ အာရုံဝင်စားနေခဲ့လို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ရဲကျော်နှင့် ကျမှပင် သူမအဖို့ ကလေးမုန့်ပေးကြိုက်သလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့လေသည်။
ရဲကျော်မှာ အသက်(၁၈)နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အသက်ထက်ပိုမိုကြီးထွားလေသည်။ ဆယ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်သော်လည်း ဆယ်တန်းကို နှစ်ခါဆက်တိုက်ကျထားသဖြင့် အပြင်ဖြေရန်အတွက် အေးအေးဝင်း၏ ကျုရှင်သင်တန်းတွင် လာရောက်သင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဤသို့ သင်လာရင်းမှ အလိုက်သိသော ရဲကျော်ကြောင့် အေးအေးဝင်းမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများတွင် အကူအညီများစွာရခဲ့လေသည်။ အေးအေးဝင်းမှ လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းစရာရှိလျှင် ခိုင်းနေရင်းမှနေ၍ အေးအေးဝင်းနှင့် ရဲကျော်မှာ တပူးတွဲတွဲ ဖြစ်လာလေသည်။ အေးအေးဝင်း၏ အိမ်ကို တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ဝင်ထွက်သွားလာ၍ရသော အခွင့်ထူးခံဖြစ်လာသည်။ သို့နှင့်တနေ့မှာတော့ ရဲကျော်က အေးအေးဝင်းကို ချစ်ကြောင်းပြောပြီး အတင်းပင်ဗလကာရလုပ်လျှက် ဆရာမကို အတင်းပင်မညှာမတာ ပါကင်ဖွင့်လိုးလိုက်လေရာ အေးအေးဝင်းမှာ ကြိတ်မှိတ်ခံလိုက်ရသည်။ သို့သော်လည်း အေးအေးဝင်းမှာ ကာမရမ္မက်ကြီးသူဖြစ်သဖြင့် ရဲကျော်၏ သေချာပိုင်နိုင်သော အပျိုရည်ဖျက် ပါကင်ဖွင့်လိုးခြင်းကိုပင် အရသာတွေ့သွားလျှက် တပည့်လေး၏ လီးတန်ကြီးကို စွဲသွားခဲ့ရာ နောက်ပိုင်းတွင် ရဲကျော်လိုးချင်သည့် အချိန်တိုင်း ကုန်း ခဲ့ရသည်သာဖြစ်သည်။ အစပထမတွင်တော့ ရဲကျော်ကို ရင်ထဲမှာ မောင်လေးတဦးကဲ့သို့ ချစ်ခဲ့ရသော်လည်း ရဲကျော်၏ ပါကင်ဖွင့်လိုးလိုက်ပြီး လီးကြီးထဲမှ သုတ်ရည်များ သူမ၏ အပျိုစင်စောက်ဖုတ်ထဲဝင်လာသည်မှ အစပြုလျှက် ရဲကျော်ကို အသေခင်ခဲ့မိပြီဖြစ်သည်။ ရဲကျော်လိုးချင်သည့် အချိန်တိုင်း လက်သင့်မခံခဲ့ဘဲ တပတ်တခါသာ အလိုးခံခဲ့သော်လည်း ရဲကျော်ကဲ့သို့ပင် လီးတန်ကြီးကို သူမစောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး အမြဲတမ်း လိုးတာခံချင်နေသူဖြစ်သည်။ ယခင်က ဆရာမဘဝဖြင့် အေးအေးဆေးဆေးနေပြီး အလုပ်ထဲ ဈာန်ဝင်ထားခဲ့သဖြင့် သူမမှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပင် ကာမဆန္ဒအားကြီးကြောင်း မသိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ရဲကျော်က သူမ၏ စောက်ပတ်ကို ပါကင်ဖွင့်လိုးခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ တပတ်တခါအမြဲတမ်း ဗျင်းပေးနေသောကြောင့် သူမမှာ သူမကိုယ်သူမ နှာထန်မှန်း ယခုမှသိရခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အေးအေးဝင်းအနေဖြင့်မူ ရဲကျော်က အမြဲတမ်းချချင်နေသည့်စိတ်ကိုတော့ အလိုမလိုက်ဘဲနှင့် တပတ်တခါသာ အလိုးခံခဲ့သော်လည်း သူမကို အမြဲလိုးပေးစေချင်သည့် ဆန္ဒတော့ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး ရဲကျော်အနေနှင့် အေးအေးဝင်းနှင့် တွေ့ပြီးလိုးကြရာတွင်လည်း တချီကောင်းလိုးပေးခြင်းမပြုဘဲ အနည်းဆုံးသုံးချီလောက် တီးပေးသောကြောင့် သူမမှာအားရကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်လျှက် အလိုးခံရမှုအပေါ် နှစ်သက်စွာဖြင့် အလိုးခံခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။ ရဲကျော်အနေဖြင့် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပင်လိုးလိုး သူမအနေဖြင့် ထပ်ထပ်ပြီး အလိုးခံချင်နေမိသည်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် အေးအေးဝင်းအနေဖြင့် ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားလာခဲ့ရသော ရင်သားအလှများပျက်ကာ နို့တွဲခြင်း၊ တင်သားအလှများပျက်ကာ သူမ၏ ဖင်ကြီးပြုတ်မသွားစေရန်အတွက်သာ အမြဲတမ်းလိုလို အဘွတ်မခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် လူတိုင်းနှစ်ခါပြန်လှည့်ကြည့်ကာ သရေကျခဲ့ကြရသော ကိုယ်ခန္ဓာ အလှအပများလျှော့နည်းပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိခဲ့တာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ရဲကျော်နှင့်လက်ထပ်ပြီး နေ့တိုင်းအလိုးခံဖို့ကျတော့လည်း လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးမှန်းသိနေသည်။ သူမအနေဖြင့် ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကို ဝါသနာပါပြီး လုပ်ခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့် အပျိုကြီးဘဝဖြင့် ရာထူးတိုးယူကာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး လုပ်ချင်နေသေးသည်။ သို့သော်လည်း ရဲကျော်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးလိုးဖြစ်လေတိုင်းတွင်မတော့ မငြင်းဆန်ဘဲနှင့် စိတ်လိုလက်ရ လိုးခြင်း ခံခြင်းပြုလုပ်နေမိတော့သည်။ နောက်ပြီးတခုက အေးအေးဝင်းအဖို့ ရဲကျော်၏ အလိုးကိုခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကျောင်းဆရာများ၊ တပည့်ကျောင်းသားကြီးများ၊ တွေ့မြင်မိသော တစိမ်းယောကျာ်းသားများ၏ ပေါင်ကြားကို လှမ်းကြည့်ပြီး လီးတန်ကြီးများကို စိတ်မှန်းဖြင့် ခန့်မှန်းမိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေသည်။ အေးအေးဝင်း၏ တက်ကြွလာသော၊ ရွထလာသော ကာမရမ္မက်မှာ များစွာကြီးမားလာလျှက် ရဲကျော်ကဲ့သို့ပင် တခြားယောက်ျားသားများ၏ လီးတန်ကြီးများကို သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲ ထည့်သွင်းပြီး အလိုးခံချင်စိတ်များပင် ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။ သို့သော်လည်း ရဲကျော် တစ်ဦးတည်း၏ အလိုးကိုသာ ယခုထက်တိုင်ခံမိနေဆဲဖြစ်သည်။ တခြားယောက်ျားများ၏ အလိုးကိုမူ ခံကြည့်ချင်သော်လည်း စိတ်မှာမရဲသေး၍ ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ရဲကျော်က နို့အုံများကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေတုန်း သူမကလည်း ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ထားမိသောကြောင့် စောစောကနှစ်ချီပြီးခဲ့၍ ခဏငြိမ်သက်သွားသော ကာမဆန္ဒများတိုးပွားလာပြီဖြစ်လေသည်။ ပြွတ်.. ပြွတ်. အင်း.. ဟင်း.. ဟင်း. ရဲကျော်က အေးအေးဝင်း၏ နို့အုံများကို ကိုင်တွယ်နေရာမှ အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်လုံးအား အတင်းဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏ နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းစုပ်လိုက်သည်။
အေးအေးဝင်းကလည်း အားကျမခံပင် ရဲကျော်၏ အနမ်းများကို တုံ့ပြန်ရင်း ရင်ခေါင်းထဲမှ အသံထွက်သည် အထိ ညည်းညူမိလိုက်လေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ ရဲကျော်၏ လီးကြီးကို ကိုင်ဆုပ်မိကတည်းက ခံချင်စိတ်များ အတောမသတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရဲကျော်မှ နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်နမ်းလိုက်ချိန်တွင်မတော့ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုလီးကြီးကို ထိုးသွင်းပြီးသာ လိုးစေချင်မိတော့သည်။ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်များစိမ့်ထွက်လာနေပြီး စောက်ပတ်အတွင်းသားများမှာ စစ်စစ် စစ်စစ်ဖြစ်လာနေလေပြီ။မမဘာလဲဟင် မောင်လေးမမကို လိုးတော့မယ်နော်အင်း.. ဟင်း.. ဟင်း.. လိုးပါတော့ မောင်လေးရယ်.. မမ မနေတတ်တော့ဘူး မမက ဘယ်လို လိုးစေချင်လဲဟင် မောင်လေး ကြိုက်သလို လိုးပါကွယ်.. မောင်လေးလုပ်သမျှကောင်းတာချည်းပါဘဲ ဒါဆိုရင် ကုတင်စောင်းမှာ လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးနော်အင်းပါ မောင်လေးရယ်.. မောင်လေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရပါမယ် ဟွန်း.. သူနဲ့ကျမှ လူလဲအရှက်ကုန်ရတော့တယ် အေးအေးဝင်းမှာ ရဲကျော်၏ အလိုးကို အလွန်ပင် ခံချင်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ရဲကျော်ပြောသည်နှင့် မဆိုင်းမတွပင် ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ယခင်ကလည်း ရဲကျော်က ကုတင်စောင်းမှာ လက်ထောက် ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးသည်ကို ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သဖြင့် ဆရာမလုပ်သူမှာ မငြင်းဆန်ပဲ အလိုးခံရန် အသင့်ပြင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အေးအေးဝင်းက ကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကြမ်းပြင်တွင်ချကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ကုတင်စောင်းတွင် ထောက်ထားလိုက်သည်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပူးမထားဘဲ ခပ်ခွာခွာလေး ထားပေးလိုက်သည့်အတွက် တင်းပြောင်လုံးဝန်းအိစက်နေသော အေးအေးဝင်း၏ တင်သားကြီးများမှာ ကားတစ် အယ်ထွက်လျှက်ရှိနေလေသည်။ ကြီးမားပြန့်ကျယ်သော အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုမှာလည်း ဖင်ကြားထဲမှနေ အနောက်ဖက်သို့ စူထွက်နေသည်။ ရဲကျော်ကလည်း ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီး အေးအေးဝင်း၏ နောက်ဘက်တွင် ရပ်လိုက်သည်။ ဆရာမ၏ ဖင်အိုးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးနှင့် စူထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကို အရသာခံကြည့်နေလိုက်သည်။ ရဲကျော်၏ ခုနှစ်လက်မခန့်ရှည်သော၊ ကျပ်ပြားလုံးခန့်တုတ်သော လီးတန်ကြီးက ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ပြောင်တင်းဝင်းလက်စွာဖြင့် တရမ်းရမ်းဖြစ်လို့နေသည်။ဖတ်.. ဖတ်.. ရဲကျော်က အေးအေးဝင်း၏ ပြောင်တင်းနေသာ ဖင်တုံးကြီးနှစ်ခြမ်းကို လက်ဝါးကြီးဖြင့် တဖတ်ဖတ်ရိုက်လိုက်ပြီး ဖင်သားကြီးများကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်သည်။ အေးအေးဝင်း၏ တင်သားကြီးများမှာ ရဲကျော် လက်ဝါးဖြင့် ရိုက်လိုက်ချိန်တွင်မတော့ တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ လှုပ်သွားလေတော့သည်။ ရဲကျော်က ကြီးမား၍ အယ်ကားသွားသော ဖင်ဖင်ဖွေးဖွေးအယ်အယ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင် ဆုပ်နယ်နေပြန်ပါသည်။ ပြွတ်.. ပြွတ်. အေးအေးဝင်း၏ တင်သားကြီးများကို ပါးစပ်ဖြင့် ထိကပ်လိုက်ပြီး တဖက်စီကို နမ်းရှံ့လိုက်ပြန်သည်။ ရဲကျော်က ထိုသို့နမ်းရှုံ့လိုက်ချိန်တွင် အေးအေးဝင်း၏ တင်သားကြီးများမှာ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားလေသည်။
မောင်လေးရယ်.. ဟင်း.. ဟင်း.. ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွယ်.. လိုးမှာဖြင့်လိုးလိုက်စမ်းပါ.. မမအနေခက်လို့ပါ အင်းပါ မမရယ် မောင်လေး.. လိုးတော့မှာပါ ရဲကျော်က သူ၏အော်လန်ဒစ်ပြဲလီးတန်ကြီးကို လက်တဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး အေးအေးဝင်း၏ ဖင်ကြီးအနောက်ဖက်သို့ စူထွက်နေသော စောက်ပတ်အဝကြီးကို တေ့လိုက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်ပေါ်ကို ကုန်းလိုက်ပြီး ခွလိုက်ကာ သူ၏လက်နှစ်ဖက်အား နို့အုံများကို လှမ်းဆွဲဆုပ်ကိုင်၍ လီးတန်ကြီးကို ဖိသွင်းကာ လိုးလိုက်ပါတော့သည်။ ဗျစ်.. ဖွတ်.. ပလွတ်အ.. အု.. အု.. ဟင်း.. ဟင်း.. ဖြေးဖြေး မောင်လေးရယ်.. ဖြေးဖြေးသွင်းပါ.. အင်း.. ဟင်း.. အွန်း..အင်းပါ.. မမရယ်.. အား.. အီး ဗျစ်.. ပလွတ်.. ဖွတ် ရဲကျော်မှာ လီးတန်ကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်းဖိသွင်းလိုက်သော်လည်း အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်မှာ ပေါင်နှစ်ချောင်းသိပ်မဟသဖြင့် လီးတန်ကြီးမှာ နှစ်လက်မမျှသာ ဝင်သွားလေသည်။ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ စောစောက နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးထားပြီး မသုတ်ရသေးသော သုက်ရည်နှင့် စောက်ရည်များအပြင် ယခုထပ်မံ၍ ထွက်လာသော စောက်ရည်များကြောင့် လီးတန်ဒစ်ပိုင်း ထိပ်ဖူးဝင်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရဲကျော်က အားနဲ့ဖိသွင်းလိုးလိုက်သဖြင့် အစပိုင်းကတင်းခံနေသော်လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ လီးတန်ကြီးမှာ အဆုံးထိဝင်သွားလေတော့သည်။ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ကြမ်းတမ်းစွာဖြင့် ထိုးခွဲဝင်ရောက်သွားသော လီးတန်ကြီးကြောင့် သူမမှာ အနည်းငယ်နာကျင်သလိုဖြစ်သွားရပြီး ရဲကျော်ကို ဖြေးဖြေးသွင်းရန် ပြောလိုက်ရသည်။ ရဲကျော်မှာမူဟုတ်ကဲ့ပါမမရယ် ဟုပြောလိုက်သော်လည်း လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ထဲ ဝင်အောင် အတင်းထိုးသွင်းလိုးလိုက်သဖြင့် လီးတန်ကြီးမှာ စောက်ပတ်ထဲတဆုံးဝင်သွားပြီး ရဲကျော်၏ ဆီးစပ်အမွှေးများနှင့် အေးအေးဝင်း၏ ဖင်သားကြီးများထိတွေ့သွားလေတော့သည်။ အေးအေးဝင်းမှာ လီးတန်ကြီးက စောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာသောဒဏ်ကို ခံစားရသဖြင့် သူမ၏ စအိုဝလေး ရှုံ့ကနဲတချက်တွန့်သွားရပြီး ဖင်ကြီးမှာလည်း ခုံးကြွတက်လာတော့သည်။ ရဲကျော်၏ ကြမ်းရှသော လမွှေးများက သူမ၏ ဖင်သားကြီးကို ပွတ်သပ်မိနေသဖြင့် တမျိုးအရသာရှိကာ ဖင်ကြီးကို ယမ်းခါမိလိုက်လေသည်။ ပြွတ်.. ဖွတ်.. ပလွတ်.. ပြွတ်.အင်း.. ဟင်း.. ဟင်း.. ဟင်း.. ရှီး.. အ.. အား.. စောက်ပတ်ထဲလီးအဆုံးဝင်လားဟင် မမ အင်း.. အ.. ဝင်တယ်.. ဝင်တယ်.. မမ သားအိမ်တောင် ထောက်သွားတယ်.. အား.. အား..ရဲကျော်က အဆုံးထိ ဝင်သွားသော လီးတန်ကြီးဆီမှနေ၍ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းရှိ ပျော့အိနူးညံ့သော စောက်ပတ်သားများ၏ ဖမ်းယူစုပ်ညှစ်နေသော အရသာကို ခံရင်း လီးတန်ကြီးကို ခဏစိမ်ထားလိုက်သည်။ အေးအေးဝင်းကလည်း သူမ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်း နံရံများနှင့် ထိတွေ့နေသော လီးတန်ကြီးမှ ရရှိသော အရသာကို ကောင်းစွာ ခံစားရင်းမှနေ၍ ကုတင်ပေါ်တွင် ထောက်ထားသော လက်ကိုကွေးလျှက် သူမ၏ ခေါင်းနှင့် ရင်ဘတ်ကို ကုတင်ပေါ် ထိကပ်လိုက်သည်။
ထိုအခါတွင်မတော့ သူမ၏ ဖင်အိုးကြီးမှာ ကော့ထောင်တက်သွားပြီး ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီး ဝင်ထွက်ရန် လွယ်ကူချောမွေ့သွားလေသည်။ အင့်.. မောင်လေးရယ်.. အား.. အီး.. အင်း ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးမှာ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ အဆုံးထိဝင်အောင် လိုးဆောင့်လျှက် အဝနီးပါးရောက်အောင်ပြန်ဆွဲထုတ်ကာ တဆုံးဝင်အောင် ထပ်မံလိုးဆောင့်ခြင်းဖြင့် မရပ်မနား လိုးဆော်နေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာလည်း သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲတိုးဝင်လိုက် ထွက်သွားလိုက်ဖြင့် လိုးနေသော ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးက စောက်ခေါင်းနံရံများကို ပွတ်တိုက်ပြီး ဝင်ထွက်နေတဲ့ ကောင်းမွန်သော အရသာကို ခံစားရလေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ လီးတန်ကြီး၏ မညှာမတာ လိုးဆောင့်မှုစွမ်းအားကြောင့် အရသာထူးကို ခံစားရာတွင် အောက်နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်လုနီးပါးကိုက်ထားရင်း ခေါင်းကလေးမော့ကာ မော့ကာ ညီးတွားရင်းဖြင့် ခံ နေရရှာလေသည်။ ကုတင်ပေါ်တွင် ကိုယ်တပိုင်းနီးပါးတင်နေသဖြင့် ထောက်ထားစရာမလိုတော့သော လက်တဖက်ဖြင့် အေးအေးဝင်းမှာ သူမ၏ တင်ပါးကို အသာပြန် ဆုပ်နယ်နေမိတော့သည်။ ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးမှာ တုတ်ခိုင်ကြီးမားပြီး မဲနက်ရှည်လျားကာ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်ဖြူအမြုပ်ကလေးများ အန်ထွက်လာအောင် အသားကုန် လိုးဆောင့်နေတော့ရာ သူမမှာ ကောင်းသထက်ကောင်းလာပြီ ဖြစ်သည်။ တချက်တချက် ဆောင့်လိုက်တိုင်း အေးအေးဝင်း၏ ဖင်သားကြီးတွေမှာ တုန်ခနဲ တုန်ခနဲ ဖြစ်၍သွားနေရသည့်အပြင် မချိမဆန့်လေး ညည်းညူကာ စုပ်သပ်ရင်းကပင် ဖင်ကြီးကို တောင့်ကာတောင့်ကာဖြင့် ဆောင့်ချက်တွေကို တန်ပြန်၍ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ပစ်ပေးရင်း အားပါးတရပင် အလိုးခံ၍ နေလေတော့သည်။ ပြွတ်.. စွတ်.. ဖွတ်.. ပြွတ်.. စွတ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. ဆောင့်.. ပြီ.. မမရယ်.. မမကို ဒီထက်ကောင်းအောင်.. လုပ်.. ပေး.. မယ်.. ဘယ့်နှယ့်လဲ မမ.. ခံနိုင်ပါ့မလား.. အား.. အီး.. မမ.. ခံနိုင်.. တယ်.. အ.. လိုးသာ.. လိုး.. ဘာပဲဖြစ်.. ဖြစ်.. မမ.. ကောင်းအောင်.. လိုး.. ပေး.. အား.. အီး.. ကောင်းတယ်.. ပြီးတော့မယ်.. အ.. ဆောင့်.. စကားမပြောနဲ့.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. အား.. ပြီး.. ပြီး.. အား.ရဲကျော်က စကားလည်းပြောရင်း လိုးဆောင့်နေရာ အေးအေးဝင်းမှာ ဖင်ကြီးကို နောက်ကော့ ကော့ပေးပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို ယမ်းခါလျှက် ပြီး သွားရလေသည်။ ရဲကျော်မှာလည်း ဆရာမလေး၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ချုပ်လိုက်ပြီး အားကုန်ဆောင့်ကာ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ ဟင့်.. ဟင့်.. ဟင်း.. ဟင်း. အေးအေးဝင်း တကိုယ်လုံး တုန်သွားပြီး ခွေကျမလို ဖြစ်သွားသဖြင့် ရဲကျော်က သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ထိန်းလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ ပွေ့ချီလိုက်သည်။
အေးအေးဝင်းမှာ ကုတင်ပေါ်တွင် ကိုယ်တဝက်တင်နေပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ခြေထောက် ထောက်လျှက် ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ပတ်လေး ဝင်လျက် တန်းလန်းဖြစ်နေသည်။ မမ ဟင်.. မောင်လေး.မမ ခံနိုင်တယ် မဟုတ်လား.. အင်း.. ခံနိုင်တယ်.. လိုးချင်သလောက်လိုး.. မမ ခံနိုင်တယ် တကယ်.. ခံမှာလားဟင်..တကယ်မဟုတ်ဘူး.. နှစ်ကယ်. ဒါဆို လိုးတော့မယ်နော် လိုး.. လိုး.. ကြိုက်သလောက် လိုး.. ပြွတ် လိုးမယ်ဆို.. ဘာလို့ချွတ်ပစ်လိုက်ရတာလဲ.. ဟင့်မမရယ်.. အရည်တွေ သုတ်လိုက်အုံးမယ်လေ.. မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလားလိုအင်းပါ.. စောင့်ပါ့မယ် အေးအေးဝင်းမှာ ရဲကျော်က လိုးမည်ပြောပြီးမှ လီးတန်ကြီးကို သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ သူမ အဖုတ်ထဲတွင် ဟာကနဲဖြစ်သွားသည်။ သူမမှာ ဖင်ကုန်းပြီး အဆော်ခံရသည်ကို အရသာတွေ့နေပြီမို့ ရဲကျော်က ထပ်မံလိုးဦးမည်ဆိုသောကြောင့် သူမ၏ ကာမဆန္ဓများ ကြွလာပြီး အလိုးခံချင်စိတ်များ ကြီးစိုးနေပြီဖြစ်သည်။ ရဲကျော်က သူမကို ကုတင်ပေါ်ပွေ့တင်ပြီး လီးတန်ကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ချိန်တွင် သူမဖာသာ သူမ ကုတင်ပေါ် မိချောင်းတွားတက်ပြီး မှောက်နေလိုက်လေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ အလိုးခံရခြင်းအပေါ် အားရကျေနပ်လျှက် ဆက်လက်၍လည်း အလိုးခံချင်နေပြီဖြစ်ရာ ဖင်ပြောင်ကြီးနှင့်ပင် မှောက်လျက်အိပ်နေတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ရဲကျော်မှာ အခန်းတံခါးဆီသို့ သွားပြီး တံခါးကို အသာဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီး တံခါးကို ပြန်မပိတ်ဘဲ အခန်းထဲသို့ ပြန်ဝင်လာလေသည်။ ကုတင်ခြေရင်းတွင် တင်ထားသော အေးအေးဝင်း၏ထမီကို ဆွဲယူပြီးနောက် သူ့လီးကြီးတွင် ပေနေသော အရည်များကို သုတ်လိုက်သည်။ အေးအေးဝင်း မှောက်အိပ်နေသည့်ဘေးသို့ ထမီစကို ကိုင်ပြီးတက်ကာ ဘေးတွင်ထိုင်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် ရဲကျော်က သူ၏ လက်တဖက်ကို အေးအေးဝင်း၏ တင်ပါးပေါ်ကိုင်လျှက် ကျန်လက်တဖက်တွင် ကိုင်ထားသော ထမီစနှင့် သူမ၏ စောက်ဖုတ်တွင် ပေပွနေသော အရည်များကို သုတ်ပေးနေလေသည်။ ပထမတွင် အေးအေးဝင်း၏ ဖင်သားများ၊ နောက် ဖင်အကွဲကြောင်း၊ ပြီးမှ စောက်ဖုတ်အုံ အပြင်ပိုင်း နှင့် ပေါင်ကြားများကို သုတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် အခန်းတံခါးက ဖြည်းညှင်းစွာ ပွင့်လာပြီး ရဲကျော်၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော ကျော်မျိုး နှင့် မိုးကြီးတို့နှစ်ယောက်ဝင်လာလေသည်။ ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးတို့တွင် အဝတ်အစားဟူ၍ လုံးဝမရှိကြဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးများနှင့် ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ အခန်းတွင်းသို့ အသံမကြားအောင် ဝင်လာပြီး ရဲကျော်နှင့် အေးအေးဝင်းရှိရာသို့ အသံမထွက်အောင် ကပ်လာသည်။
ကျော်မျိုးမှာ ရဲကျော်ကဲ့သို့ အသက်(၁၈)နှစ်ခန့်ရှိပြီး ရဲကျော်ကဲ့သို့ပင် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မျိုးရှိသည်။ ကျော်မျိုး၏ ပေါင်ကြားမှ မတ်တန်းနေသော လီးချောင်းကြီးမှာတော့ ရဲကျော်ထက် နည်းနည်းပိုရှည်ပြီးတုတ်သည်။ လီးချောင်းကြီးမှာ အဖျားရှုးပြီး အရင်းတုတ်သွားသော တွင်းချဲ့မယ့် လီးမျိုးဖြစ်သည်။ ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးမှာမူ အရင်းရော အဖျားရောပါ တဖြောင့်တည်းဖြစ်သည်။ မိုးကြီးမှာ ကိုယ်ခန္ဓာပိန်ပိန်ပါးပါးဖြစ်ပြီး အသက်မှာ (၁၇)နှစ်ခန့်သာရှိသည်။ သူတို့သုံးဦးတွင် အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူ၏ ပေါင်ကြားမှနေ၍ ရှေ့သို့ငေါထွက်နေသော လီးတန်မှာမူ အရှည်လေးလက်မခွဲခန့်သာရှိပြီး အလုံးကသေးသည်။ သို့သော်လည်း အေးအေးဝင်း၏ ဖင်တုံးလုံးနှင့် မှောက်အိပ်နေပြီး ပေါ်လွင်နေသော ကိုယ်ခန္ဓာအလှကြောင့် မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးမှာလည်း တောင်မတ်နေသည်။ ရဲကျော်မှာ အလွန်ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့သူဖြစ်သည်။ အေးအေးဝင်းကို မရမကအတင်းအကျပ်တက်လိုးပြီး တပတ်တခါဖြုတ်နေခြင်းများကို သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော ကျော်မိုးနှင့် မိုးကြီးတို့ကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချသည်။ ရဲကျော်တို့သုံးယောက်မှာ မိန်းကလေးကိစ္စတွင် ဇ ရှိသောသူများဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်လုံး တိုင်ပင် သဘောတူထားသောအချက်မှာ မည်သူနှင့်ဖြစ်ဖြစ် သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး စား ခွင့်ရလျှင် သူငယ်ချင်းများကပါ ဝိုင်း ကြိတ်ကြမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ပထမ မိုးကြီးနှင့် သမီးရည်းစားဖြစ်ခဲ့သော အေးသန်းမြင့်ကို မိုးကြီးက ဂွင်ဖန်ပြီး စတင်လိုးသောနေ့မှာပင် သုံးယောက်စလုံး ဝိုင်းဘွတ်ကြရာ ပြဿနာ မဖြစ်အောင် မနည်းကြီး ရှင်းကြရသေးသည်။ အေးသန်းမြင့်က ကြိတ် ခံ ပြီး မိုးကြီးနှင့် မဆက်သွယ်တော့သဖြင့် တော်သေးသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သုံးဦးအတွက် ဒုတိယသားကောင်မှာ အေးအေးဝင်းဖြစ်သည်။ ရဲကျော်က ငပါးဖြစ်သည်။ သူတဦးတည်း အေးအေးဝင်းကို အားရအောင် တီးချင်သဖြင့် အေးအေးဝင်းနှင့် တွေ့ပြီးလိုးသည်ကို ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးမသိအောင် လုပ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တော့ ရဲကျော်မှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးကို အသိပေးပြီး အိမ်တံခါးကို ဖွင့်ပေးထားခဲ့သည်။ ဒီအတွက် အေးအေးဝင်းကို အားရအောင် အမုန်းဆွဲပြီးမှ ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးကို ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အေးအေးဝင်းကမူ မျက်စိများမှိတ်ပြီး အမောဖြေ ဇိမ်ယူနေရာ သူမချစ်သူ၏လုပ်ရပ်ကို မသိဘဲရှိနေသည်။ ရဲကျော်က ကုတင်နားသို့ရောက်လာသော ကျော်မျိုးကို သူ၏ လက်ထဲမှ ထမီစကို ကိုင်သုတ်ရန် မေးငေါ့ပြလိုက်ရာ ကျော်မျိုးက ထမီစကိုကိုင်၍ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်ကို အသာသုတ်ပေးလိုက်သည်။ အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ နောက်သို့စူထွက်နေသဖြင့် ကျော်မျိုးမှာ တံထွေးမျိုချပြီး ထမီစနှင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို သုတ်ပြီး ထမီစကို စောက်ပတ်အတွင်းသို့ လက်ညှိုးနှင့် ထိုးထည့်ပြီး သုတ်ပေးလိုက်သည်။အား.. မောင်လေးရယ်.. ဖြေးဖြေးသုတ်ပါကွယ်.. အိုး. ဆရာမလေးမှာ ရဲကျော်သုတ်သည်ထင်ပြီး မျက်စိမဖွင့်ဘဲ ပြောလိုက်သည်။
ကျော်မျိုးက အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်ပြီး ကိုင်နေရသဖြင့် မနေနိုင်တော့ဘဲနှင့် ထမီစကို လွှတ်ချပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်သည်။ မမ.. လေးဖက်ထောက်လိုက်နော် ရဲကျော်က ကျော်မျိုးလုပ်ချင်လာပြီမှန်းသိသဖြင့် အေးအေးဝင်း၏ မှောက်ရက်အနေအထားမှ ဒူးထောက်လိုက်ရန်ပြောပြီး သူမ၏ ဒူးခေါင်းနှင့် ပေါင်တန်ကို ကိုင်၍ တင်ပါးကြီးကို ဖျန်းကနဲ လက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက်လိုက်သည်။ ဟင့်ကွယ်.. မောင်လေးကလဲ.. ဗြိ.. ဖွတ်.. အား.. သေပါပြီ.. အမလေး.. လေး.. ဟင်း.. ဟင်း.. ကျွတ်. ဖြေးဖြေးကွယ် မောင်လေးရယ်.. တကထဲမှပဲ ကြမ်းလိုက်တာ.. ဟင်.. မင်း.. မင်း.. ရဲကျော်က ကျော်မျိုးနောက်မှ လိုးလို့ရရန်အတွက် အေးအေးဝင်း၏ ဖင်သားကြီးကို ရိုက်ပြီး ခြေထောက်ကို ဆွဲထောင်ပေးလိုက်ချိန် အေးအေးဝင်းကလဲ ဒူးကိုထောက်ပေးပြီး ကားလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်တွင် ရဲကျော်မှာ သူမဘေးတွင်ရှိနေပြီး သူမဖင်နောက်မှ တယောက်ယောက်က သူမ ဖင်သားကြီးများကို ဆွဲဖြဲပြီး လီးချောင်းကြီးဖြင့် အတေ့ခံလိုက်ရသဖြင့် အံ့သြထိတ်လန့်သွားကာ စကားသံများ ထစ်ငေါ့သွားရသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကျော်မျိုးက အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်အတွင်းသို့ လီးချောင်းကြီးကို အဆုံးထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။ ဘွတ်.. ဗျစ်.. မောင်လေး.. မင်း.. မင်း.. ရက်စက်လှချည်လား.. ဟင်.. အွန့်.. အွန့်.. အူး အေးအေးဝင်းမှာ လူးလဲထလိုက်မည်ပြုလိုက်ချိန်တွင် မိုးကြီးက သူမ၏ ဘေးဘက် ကုတင်ပေါ်သို့ ခုန်တက်လိုက်ပြီး လက်တဖက်ကို ဆွဲချုပ်လိုက်သလို ရဲကျော်ကလည်း သူ၏ဘက်မှနေ၍ ကျန်လက်တဖက်ကို ကိုင်လိုက်လေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ လူးလဲထရန်အတွက် လက်နှစ်ဖက်ကို ချုပ်ထားခံရသဖြင့် မထနိုင်ရကား ရဲကျော်ကို လှည့်ရန်တွေ့သည်ကို ရဲကျော်က ပါးစပ်ပိတ်လိုက်လေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းလုံးဝလှုပ်မရအောင်ဖြစ်နေသဖြင့် လီးဝင်နေသော အောက်ပိုင်းကို လှုပ်ရှားရန်ပြင်လိုက်သည်။ ကျော်မျိုးက သူ၏ထောက်ထားသော ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်ကို အေးအေးဝင်း၏ ဒူးခေါင်းများ အတွင်းကပ်လျှက် ထောက်ထားပြီး သူမ၏ ဖင်တုံးကြီးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖိထားသဖြင့် အေးအေးဝင်းမှာ ဘယ်လိုမှလှုပ်မရချေ။ ဗြစ်.. ဗြစ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. ဒုတ်.. ပလွတ်.. ဟ.. အ. ကျော်မျိုးက အေးအေးဝင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်နေသော သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် အမြန်ဆုံး လိုး လိုက်ရာ စောစောက သေသေချာချာ မသုတ်ထားသဖြင့် ကျန်ရှိနေသော အရည်များကြောင့် လီး အဝင်အထွက်မှာ ရှောရှောရှုရှုဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် အေးအေးဝင်းအနေဖြင့် ယခင်ကတည်းက ကာမဆန္ဒပြင်းပြနေသူဖြစ်သဖြင့် ကျော်မျိုး၏ လီးချောင်းကြီး ဝင်ထွက်ပွတ်တိုက်နေမှုကို သာယာလာမိလေသည်။
ထို့အတွက် သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်များ စိမ့်ထွက်လာသဖြင့် လီးဝင်ထွက်ခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်ပြီး လီးဝင်ထွက်သံများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မိုးကြီးက အေးအေးဝင်း၏ လက်တဖက်ကို ချုပ်ကိုင်ရင်း သူမ၏ နို့အုံကြီးတဖက်ကို ချေမွဖျစ်ညှစ်ပေးနေသည်။ အေးအေးဝင်းမှာ ရုန်းကန်၍ မလွယ်မှန်းသိလိုက်ရပြီး ကျော်မျိုး၏ လိုးဆောင့်မှုအပေါ် အရသာရှိလာသဖြင့် တအားရုန်းကန်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ အသာငြိမ်နေလိုက်သည်။ ရဲကျော်က အေးအေးဝင်းတယောက် အလိုးခံရမှုကြောင့် နှာထန်နေပြီမှန်းသိလိုက်သဖြင့် သူမ၏ ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားသောလက်ကို လွှတ်ကာ အယ်ထနေသောနို့ကြီးတလုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက်သည်။ အေးအေးဝင်းမှာ အမျိုးသမီးတိုင်းကြောက်ကြသော အခြေအနေတရပ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သူမကို အားမနာတမ်း မညှာမတာ ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် လိုးဆော်ကြမည့် ကောင်လေးသုံးယောက်၏ လက်တွင်းသို့ရောက်ရှိနေပြီး ပိုဆိုးသည်မှာ သူမကိုယ်တိုင်၏ ရင်ထဲမှာပင် လှိုက်ဖိုနေပြီး ကာမဆန္ဒများထကြွကာ အရသာတွေ့နေခြင်းဖြစ်သည်။အား.. အီး.. အူး.. အ.. အား ထို့အတွက်တော့ အေးအေးဝင်းမှာ ကျော်မျိုး၏ လိုးဆောင့်မှုအပေါ် ဖင်ကြီးဖြင့် ပြန်ဆောင့်ပေးရင်း ကာမအထွတ်အထိပ်ရောက်ကာ ပြီးသွားရလေတော့သည် တောက်.. ဟင်း.. ဟင်း.. ဒင်းတော့လား.. လာမှသိမယ်.. ဟင်း.. ဟင်း.ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေသဖြင့် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်နေရသည်။ ရင်ထဲမှနေ၍ လှိုက်လှိုက်တက်လာသော ယူကျုံးမရမှု၊ မကျေနပ်မှု၊ မချိတင်ကဲဖြစ်ရမှုများကို တောက်.. တချက်ခေါက်၍ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ရပြီး မကျေမနပ်ရေရွတ်နေမိသည်။ ကျွန်မကို ဤသို့ ဒေါသစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော ရဲကျော်ကိုလည်း ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့သူတဦးအဖြစ် မြင်ယောင်မိပြီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဒေါသဖြစ်နေရသည်။ အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်လှဲပြီး အိပ်နေရာမှနေ၍ တဖက်ဘေးသို့စောင်းလှည့်ပြီး လက်သီးဆုပ်လျှက် မွေ့ယာကို လက်သီးနှင့် နှစ်ချက်ထိုးလိုက်မိသည်။ ဘုန်း.. ဘုန် အား.. လား.. လား.. အား မွေ့ယာထူထူပေါ်သို့ ကျွန်မလက်သီးချက်ရောက်သွားပြီး အသံနှစ်ချက်မြည်သွားသော်လည်း လက်သီးဆုပ်ထားသော လက်မှာ နည်းနည်းနာသွားသဖြင့် အသံထွက်အော်မိလိုက်ရတော့သည်။ ပြီးတော့မှပင်.. ကိုယ်ကဘယ်လိုဘဲ ဒေါသထွက်နေ၊ မကျေနပ်ဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ ကိုယ်ကမိန်းကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပင် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မပြန်သတိထားလိုက်မိသည်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါသည်။ စောစောက ကျွန်မအနေဖြင့် ဒေါသထွက်ထွက်နှင့် မွေ့ယာကို လက်သီးဆုပ်ပြီးထိုးလိုက်တာ မွေ့ယာဘာမှမဖြစ်ဘဲ ကျွန်မလက်သာနာသွားမဟုတ်လား။ ဒီတော့ ကျွန်မအနေဖြင့် ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါသထွက်နေနေ၊ ဘယ်လိုဘဲ မချိတင်ကဲဖြစ်နေနေ မကျေနပ်ဖြစ်နေနေ ကျွန်မမှာ မိန်းမသားတဦးဖြစ်နေသောကြောင့် ရဲကျော်တို့လို ယောက်ျားသားများနှင့် ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ ယှဉ်ပြိုင်လို့မရနိုင်မှန်း တွေးမိလိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်ိကိုတွေးမိလေတိုင်းမှာပင် ရင်ထဲမှာတော့ တနုံ့နုံ့ဖြင့်ဖြစ်နေရလေသည်။
ရဲကျော်ကိုလည်း လုပ်ရက်လေခြင်း၊ အချစ်ကို အလွဲသုံးစားပြုရက်လေခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအပေါ် စော်ကားရက်လေခြင်း၊ အထင်သေးရက်လေခြင်းဟူ၍ မချိတင်ကဲစိတ်များဖြင့် ရင်ထဲမှာ မကောင်းဖြစ်ရလေသည်။ လွန်ခဲ့သော ငါးရက်လောက်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ကျွန်မမှာ ယူကျုံးမရဖြစ်နေရသည်။ ကျွန်မမှာ ကုတင်ပေါ်လှဲနေရင်းမှ အိပ်ခန်းတံခါးဆီသို့ အကြည့်များကရောက်သွားမိသည်။ အဲဒီအိပ်ခန်းတံခါးမှပင် ရဲကျော်ကို ဝင်ထွက်ခွင့်ပြုပြီး ကျွန်မ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို သူလိုရာသုံးဖို့ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်မမှာ ရှိသော အချစ် မေတ္တာနှင့်တကွ ကျွန်မ၏ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးကို ချစ်သူ့အတွက်သာထားရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲကျော်အနေဖြင့် ပြုချင်သမျှပြုပါစေ.. ခံ ရန်အဆင်သင့်ခဲ့သော ကျွန်မဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သူကလည်း ကျွန်မပေးခဲ့သမျှ အခွင့်အရေးတိုင်းလိုလိုကိုပင် အပြည့်အဝအသုံးချ ရယူခဲ့တာချည်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မ၏ အခန်းတံခါးကို ကျော်ဖြတ်လျက် ကျွန်မ၏ အိပ်ခန်းထဲကို အချိန်မရွေးစတမ်း ဝင်လိုဝင် ထွက်လိုထွက်နေခဲ့သည်။ ကျွန်မ စိတ်ပါပါ မပါပါ ကျွန်မ၏ ထမီကို လှန်လျက် ကျွန်မ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ထိုးထည့်ပြီး လိုးနေမြဲဖြစ်သည်။ ကျွန်မကလည်း ကျွန်မပင်ဖြစ်လေသည်။ ရဲကျော်မို့ ကျွန်မကို နှုတ်ခမ်းများ နမ်းစုပ်လျှက် နို့ကြီးများကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လျှက်၊ စောက်ဖုတ်ကြီးကို နှိုးဆွပေးပြီး ကျွန်မ၏ ထမီကို ချွတ်လိုက်သည်နှင့် ရဲကျော်၏ လီးချောင်းကြီးဖြင့် ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲကို တိုးဝင်လိုးဆောင့်ပေးမှုအရသာကို အာသာငမ်းငမ်း ခံချင်လာမိတော့သည်။ ကာမဆန္ဒရမ္မက်ကြီးမားကာ နှာထန်သည်ဟူ၍ ပြောချင်ပြောကြပါစေတော့ ကျွန်မခံရမည်သာဖြစ်လေသည်။ ကျွန်မကိုယ်၌ကိုက ရဲကျော်နှင့်တွေ့လေတိုင်း သူ၏ အလိုးကို အဆက်မပြတ်ခံချင်နေမိမှတော့ သူ၏ လီးချောင်းကြီးမှာ ကျွန်မ မမြင်နိုင်သော ဆွဲအားတွေရှိနေသည်ဟုပင် ကျွန်မဆိုချင်မိပါသည်။ ဒီအတွက် ရဲကျော်မှ ကျွန်မ၏ စောက်ပတ်လေးကို သူ၏ လီးချောင်းကြီးဖြင့် ဘယ်လောက်ပဲလိုးပါစေ ကျွန်မမှာ ရိုးအီသွားခြင်းမရှိရုံမျှမက ခံပြီးရင်းခံချင်ပင်ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ သူ တနေ့လုံး တညလုံး လိုးလျှင်တောင်မှ ခံချင်စိတ်က ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဟုတောင် ထင်မိသည်။ သို့သော် ရဲကျော်ကို တပတ်တခါသာလိုးဖို့ အခွင့်ပေးကာ စည်းကမ်းချထားခဲ့ပါသည်။ ရဲကျော်ကလည်း တပတ်တခါသာ လိုးသည်ဆိုပေမယ့် သူမို့လို့လိုးလိုက်လျှင် ကျွန်မမှာ မျော့မျော့လေးသာ ကျန်နေခဲ့ရသည်။ တပတ်တခါလိုးခွင့် ပေးထားခြင်းအပေါ် အပြည့်အဝအသုံးချကာ တညလုံးလိုလိုပင် သုံးလေးငါးချီဆက်တိုက် လိုးပါတော့သည်။ ကျွန်မအတွက် ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေလေတော့ မငြင်းနိုင်ဘဲ သူ့စိတ်တိုင်းကျ အလိုးခံခဲ့လေသည်။ သူ့ကို တပတ်တခါသာ ပေးရန်စည်းကမ်းထားခဲ့ပေမယ့် ကြားရက်တွေမှာ ရဲကျော်တယောက် ကျွန်မစောက်ပတ်လေးကိုလာပြီး လိုးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဘယ်သူမှ သတိမထားမိတာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ချစ်သူနဲ့ မတွေ့တဲ့ရက်တွေမှာတော့ စာသင်ဖက် ဆရာတွေ၊ စာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ယောကျာ်းတွေရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားဖုဖောင်းနေတဲ့ နေရာကို အမှတ်တမဲ့လိုလိုနဲ့ကြည့်မိတာကို ခဏခဏမငြင်းနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သူတို့တတွေမှာရှိတဲ့ လီးချောင်းကြီးတွေနဲ့ ကျွန်မကိုလာလိုးမယ်ဆိုရင် အလိုးခံဘို့အသင့်ဘဲဆိုတာကို သိစေချင်တာတော့ ခဏခဏပင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မမှာက ကျောင်းဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက်ရအောင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အထာမပေးခဲ့တာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မမို့လို့ လမ်းလျှောက်သွားလျှင်ဖြင့် လူတိုင်းလိုလိုက ကျွန်မ၏ စွဲမက်စရာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ဝိုင်းကြည့်ကြတာချည်းဖြစ်လေသည်။ အထူးသဖြင့် ရင်သားအိအိထွေးထွေးကြီးနှင့် နို့တွေကြီးသလောက် သွယ်လျလျဖြစ်နေတဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်အောက်မှ ကားထွက်သွားသော တင်ပါး အိအိဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကြောင့် အေးအေးဝင်းဆိုလျှင် ဖင်တောင့်တောင့် အိုးကောင်းကောင်း ဆရာမလေးလို့ နာမည်ကြီးသူဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် ဖင်သားများ တုံခါသွားအောင်လျှောက်ပြီး လူပျိုပေါက်ကနေ ဘကြီးအရွယ်အထိ အရွယ်စုံယောက်ျားများကို ရင်ခုန်သွားစေခဲ့တာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မမှာ ရည်းစားထားခဲ့ဖူးခြင်းမရှိဘဲ ရဲကျော်နှင့်တွေ့သည့် အချိန်ကျမှပင် ဆရာမဆိုသော ဂုဏ်သိက္ခာတွေ အကုန်ကွာကျကုန်ရလေတော့သည်။ ကျွန်မအနေဖြင့် လိုအပ်သော အချိန်တွင် လိုအပ်သလို ခိုင်းစေဖို့အတွက်သာ သူ့ကို အသုံးချခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ရဲကျော်က ကျွန်မကို ပြန်၍ အသုံးချသွားခဲ့သည်။ သူ့ကို ပစားပေးခဲ့သော ကျွန်မအပေါ်တွင် နွဲ့ဆိုးဆိုးလျှက် ကျွန်မ၏ အချစ်၊ ကျွန်မ၏ ကာမကို ကျုံးသွင်းလျှက် အပိုင်စီးယူငင် သိမ်းပိုက်သွားခဲ့သည်။ ယခင်က ကာမအရသာဆိုသည်မှာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ မစဉ်းစားမိခဲ့သော်လည်း ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးနှင့် ကျွန်မစောက်ပတ်လေးထဲ ထိုးထည့် လိုးသွင်းပြီးကတည်းက လီးချောင်းကြီးကို စွဲလန်းသွားခဲ့ရသည်။ ထိုအခါမှစ၍ သူလိုးသမျှကို ကျေကျေနပ်နပ်ဖြင့် ခံခဲ့မိတာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သူလိုးသမျှခံနေပေမယ့် ကျွန်မမှာ ခံရတာအားမရတာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတော့ ရဲကျော်မှနေ၍ ကျွန်မကို လိုးနေရင်းမှ သူ၏ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးဖြစ်သော ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးကိုပါ ခေါ်လာပြီး ကျွန်မကို ဝိုင်းလိုးလိုက်ကြလေသည်။ ကျွန်မမှာ ပထမဦးစွာ ရဲကျော်လိုးနေစဉ် အရိပ်အယောင်ပြသောစကားလုံးများ ကျွန်မကို ပြောနေသော်လည်း သူ၏ အလိုးတွင်နစ်မျောပြီး ကာမအရသာကိုသာ ခံစားမိနေသဖြင့် ဒိပြင်ထွေထွေထူးထူးကို ဘာမျှဆက်မတွေးခဲ့မိတာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သုံးချီဆက်တိုက်ဆိုသလို အလိုးခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ မောပန်းသွားကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ဖြစ်သလို မှောက်လိုက်ပြီး မျက်စိမှိတ်အနားယူနေခဲ့သည်။ ဤသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူလျှက် ရဲကျော်က ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးကို ခေါ်ကာ ကျွန်မကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးလိုက်ကြလေသည်။ ပထမတွင် ကျော်မျိုးက ကျွန်မကို ဖင်ကုန်းလျှက်ပင် နောက်မှနေ၍ ကျွန်မစောက်ပတ်လေးထဲသို့ သူ့လီးချောင်းကြီး ထိုးသွင်းပြီးလိုးလေသည်။ ရဲကျော်နှင့် မိုးကြီးက ကုန်းကုန်းကွကွဖြစ်နေသော ကျွန်မ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ဖိကိုင်ထားကြပြီး ကျွန်မ၏ နို့အုံကြီးများကို ကိုင်တွယ် ညှစ်ခြေနေကြရာ ကျွန်မမှာ ပထမတော့ အံ့သြထိတ်လန့်ပြီး ယူကျုံးမရဖြစ်ရသော်လည်း ကျွန်မ ပင်ကိုကပင် ကာမဆန္ဒပြင်းပြသူဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေသောကြောင့် အသစ်အဆန်းအဖြစ် ရင်ထဲလှိုက်ဖိုပြီး ခံစားလာရသည်။
တခါမှ မကြုံဘူးသော ကာမအရသာကို ခံစားရသဖြင့် ကျွန်မမှာရုန်းကန်အော်ဟစ်ဖို့ပင် စိတ်မကူးမိတော့ဘဲ သူတို့အလိုကျ လိုးတာကို ခံလိုက်လေတော့သည်။ သူတို့ကလည်း အလာသားပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မကို တယောက်တမျိုးစီဖြင့် မရိုးအောင်လိုးပေးကြသည်။ ကျွန်မမှာ လီးအသစ်နှင့် လိုးတာကို ခံရသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က ကျွန်မ၏ နို့အုံကြီးများကို တပြိုင်နယ် ဂျုံနယ်သလို နယ်ပေးနေ၍လည်းကောင်း အလိုးခံရတာ အရသာရှိလာပြီး ခဏလေးနှင့် ပြီးသွားရလေသည်။ ကျော်မျိုးကလည်း ကျွန်မကို မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆော်လိုက်သဖြင့် ပြိုင်တူလိုလိုပင်ပြီးသွားလေသည်။ ထို့နောက် မိုးကြီးက ကျွန်မနောက်မှနေ၍ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ကျွန်မ၏ စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကြားသို့ အလျားလိုက်သွင်းပြီး ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ရာ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ပွတ်တိုက်ထိတွေ့သွားပြီး ကျွန်မ၏ ငေါက်တောက်ကလေးဖြစ်နေသော စောက်စိကလေးကို မထိခလုတ် ထိခလုတ် တိုးမိနေလေရာ ကျွန်မမှာ ထပ်မံပြီးအလိုးခံချင်လာပြီဖြစ်သည်။ အလိုးခံချင်စိတ်များ ထကြွလာပြီဆိုသည်ကို ပြသည့်အနေဖြင့် ဖင်ကြီးကိုယမ်းခါလိုက်မိသည်။ မိုးကြီးကလည်း ကျွန်မ ခံချင်နေပြီဆိုသည်ကိုသိသည့်အတွက် လီးချောင်းကြီးကို ကျွန်မ ဖင်ကြားသို့ပြောင်းပြီး ပွတ်တိုက်ပေးနေလေသည်။ ကျွန်မ၏ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာကို ပွတ်တိုက်ခဲ့သော မိုးကြီး၏ လီးချောင်းကြီးမှာ စောစောက ကျော်မျိုး၏ သုတ်ရည်များနှင့် ကျွန်မ၏ စောက်ရည်များ စိုရွှဲနေသဖြင့် ဖင်ကြားထဲ သူ၏လီးတန်ကြီးကို ပွတ်တိုက်ပေးသောအခါ ကျွန်မဖင်ကြားမှာ စိုစိစိဖြစ်သွားသည်ကို သိလိုက်ရသည်။ ကျွန်မမှာ သူ့လီးချောင်းကြီး ဘယ်အချိန် စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်လာမလဲဟူ၍ စောင့်မျှော်နေဆဲမှာ မိုးကြီးက ကျွန်မ၏ ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး ဖင်ပေါက်ဝတွင် လီးတန်ကြီးကိုတေ့လိုက်လေသည်။ အို.. ဘာလုပ်တာလဲ.. ဖင်ကိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့နော်.. မရဘူး.. မရဘူး.. မလုပ်နဲ့.. မလုပ်ပါနဲ့. မမရယ်.. အသာလေးငြိမ်နေလိုက်ပါ.. မမ.. ကောင်းရပါစေ့မယ်.. နည်းနည်းတော့.. တောင့်ခံပါ.. မမရယ်..နော်.. ကျွန်မက ဖင်ပေါက်ဝကို တေ့ထားသော မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးမှ လွတ်အောင် ဖင်ယမ်းလိုက်ပြီး ဖင်မလိုးရန် အတင်းငြင်းမိသည်။ မိုးကြီးမပြောနှင့် ကျွန်မချစ်သူ ရဲကျော်တောင်မှ ဖင်ချရန် ကြိုးစားတာကို လက်မခံခဲ့မှန်း ရဲကျော်အသိပင် ဖြစ်သည်။ ရဲကျော်ကတော့ သူ မဖွင့်ခဲ့ရသော ကျွန်မ၏ ဖင်ကြီးအား မိုးကြီးလိုးမည်ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အနေနှင့် ကျွန်မ၏ အော်ဟစ်နေသော ပါးစပ်ကို အတင်းပိတ်ကာ အသာလေးငြိမ်ခံရန်ပြောနေသည်။ မိုးကြီးက လှုပ်ရမ်းခါလျှက်ရှိနေသော ကျွန်မ၏ ဖင်ကြီးကို ငြိမ်အောင်ထိန်းလိုက်ပြီး ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို ညှစ်၍ ကိုင်ဖြဲကာ သူ၏လီးချောင်းကြီးကို ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်လေးထဲသို့ ထိုးသွင်းနေသည်။ မိုးကြီး၏ လီးတန်ထိပ်တွင် အရည်များက စိုရွှဲနေသည့်အတွက် လီးတန်ဒစ်ကြီးက ကျွန်မ၏ အပျိုစင်ဖင်ပေါက်လေးထဲသို့ တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာလေသည်။ အား.. နာတယ်.. နာ.. တယ်.. အ.. မလုပ်ပါနဲ့.. အား. ဗြစ်.. ဗြစ်.. အမလေး.. သေပါပြီ.. အင့်.. အီး.. ဟီး.. မမဖင်ကြီးက ဒီလောက်ကြီးနေတာ နာမလားလို မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးက ဆက်တိုးဝင်လာနေရာ ကျွန်မမှာနာလှသဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အသားစိုင်များမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်လျှက် အော်ဟစ်နေရလေသည်။
ရဲကျော်က ကျွန်မ၏ လက်ကိုတအားချုပ်ထားပြီး ကျွန်မ၏ ထောင်ထလာသော ခေါင်းကိုပါ ဖိထားလျှက် အောင့်ခံရန်ပြောနေသည်။ ကျွန်မမှာ နာကျင်လွန်းလှသဖြင့် ဖင်ကြီးကို ယမ်းခါနေသော်လည်း မိုးကြီးက ကျွန်မ၏ နာကျင်အော်ဟစ်မှုကို ဂရုမပြုတော့ဘဲ တဝက်သာသာဝင်နေသော သူ၏ လီးတန်ကြီးကို အဆုံးထိဝင်သွားရန်အတွက်သာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးသွင်းနေတော့သည်။ ဖင်ဆော်ခံရခြင်းသည် မိန်းမတယောက်အတွက် အဆုံးစွန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် အရှက်တကွဲဖြစ်၊ ကျိုးနွံအောင်ဇာတ်သွင်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုမူ ကျွန်မ၏ ချစ်သရှေ့တွင် ကျောင်းသားအရွယ် သူငယ်လေးများ၏ ဆီမဆွတ်ဘဲ ဖင်ပါကင်ဖွင့်ခံနေရသော အဖြစ်မှာ ဆိုးလှသဖြင့် မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းများကိုသာ ပြတ်ထွက်လုမတတ်ကိုက်ထားမိလေသည်။ ဗြစ်.. ဗြစ်.. အား.. အိ.. အင်း.. ဟင်း.. ဟင်း.. နာ.. နာတယ်.. နာတယ်.. အ.. အီး.. အင်း.. အီး.. အီး.. နာတယ်.ဖင်ပေါက်ထဲသို့ လီးကြီးတဆုံးဝင်သွားချိန်တွင် နာကျင်မှုမှ သက်သာလိုသက်သာငြား ကျွန်မ၏ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးကို ရမ်းခါလိုက်မိသည်။ သို့သော် မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးမှာ ကျွတ်ထွက်မသွားလဲရှိနေသည့်အပြင် ကျွန်မ ဖင်ကြီးကို ကြိတ်နှဲ့သွင်းကာ မွှေပေးသလိုဖြစ်နေသဖြင့် ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်ထဲတွင် ဆိမ့်သွားရခြင်းနှင့်အတူ ကျွန်မ၏ စောက်ပတ်ထဲမှလည်း ဆိမ့်ကျင်စွာဖြင့် တချီပြီးသွားရကာ ပျစ်ချွဲသော စောက်ရည်များကို ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲမှ ညှစ်ထုတ်လိုက်ရလေသည်။ မိုးကြီးကတော့ ကျွန်မ၏ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးများကို လက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ဖျစ်ညှစ်လျက် တချက်ချင်း ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးနေလေသည်။ ပြွတ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်. အ.. အ.. အ.. အီး.. အ.. အမလေး.. လေး.. အား.. အား.. ဟင်း.. ဟင်း.. ဟင်း.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. ပြွတ်. ကျွန်မ၏ ဖင်ထဲသို့ မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီး ဝင်ထွက်နေသည်မှာ စောက်ရည်နှင့် သုက်ရည်များစိုရွှဲနေသဖြင့် စေးပျစ်စွာ ဝင်ထွက်လိုးနေသဖြင့် ကျွန်မမှာ နာကျင်လျှက်နှင့်ပင် ဆိမ့်ကောင်းနေလေသည်။ သို့အတွက် ခံစားနေရသော ဖင်လိုးခံရခြင်း အရသာကို ကျွန်မမှာ မျက်စိစုံမှိတ်လျှက် အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ပြတ်မတတ်ကိုက်ထားကာ ခံစားနေရလေသည်။ ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်လေးထဲသို့ လီးဝင်ထွက်သံများဆူညံနေလျက်ရှိသလို ရဲကျော်နှင့် ကျော်မျိုးတို့နှစ်ဦးကလည်း ကျွန်မ၏ နို့အုံများကို ကိုင်ဆွဲဆုတ်ချေတာခံ နေရလေသည်။ ကျွန်မမှာ ကောင်းသော အရသာ၊ ဆိမ့်သော အရသာများ ခံစားလျှက် မိုးကျော်၏ လီးတန်ကြီး ဝင်ထွက်တာကို ဖင်ကြီးယမ်းကာ ဖင်အရသာရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရင်း မိုးကြီး၏ ဖင်ဆော်ခြင်းကို ခံနေရလေသည်။ မကြာခင်မှာပင် ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်ထဲကို လိုးနေသော မိုးကြီးက အဆက်မပြတ်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးလိုးဆောင့်ရင်းမှနေ၍ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ဖင်ပေါက်ထဲသို့ အတင်းထိုးစိုက် ဖိကပ်ပြီး သုက်ရည်များ ကို ကျွန်မ၏ ဖင်ခေါင်းထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်။
ကျွန်မမှာ ဖင်ပေါက်ထဲသို့ လီးချောင်းကြီးက တိုးဝင်လိုးလျှက် သုက်ရည်ပူပူများပန်းထည့်ခံရသော ဖင်ဆော်ခံရသည့်အရသာကို ခံစားနေရသော်လည်း ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးထိုးသွင်းပြီး လိုးခြင်းလောက် အရသာမရှိလှသဖြင့် စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးချောင်းကြီးတချောင်းချောင်းဖြင့် ထိုးသွင်းပြီး လိုးဆောင့်ပေးစေချင်သော ဆန္ဒများဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်သည်။မမ ကောင်းရဲ့လားဟင်အင်း.. ကောင်း..တော့ကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့.. အင်း.အော်.. မမရယ်.. မမစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် နောက်တခါ ထပ်လိုးပေးမယ်.. သိလား.. မမသိပ်မရုန်းနဲ့တော့နော်အင်းပါကွယ်.. အင်းပါ.. မမကို အရမ်းနာအောင်တော့ မလုပ်နဲ့နော်.. ဟုတ်ကဲ့ပါ.. မမကောင်းစေရမယ် စိတ်ချပါ.. မမ မနာစေရဘူ ကျွန်မအနေဖြင့် ကျွန်မ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးဖြင့် ထိုးသွင်းကာ လိုးစေချင်သော ကာမဆန္ဒတွေ ထကြွနေမှန်း ရဲကျော်တို့က သိသလိုပင် ဖင်ထဲ အလိုးခံရတာ ကောင်းသဖြင့် စောက်ဖုတ်ကိုပါ လိုးစေချင်သော ကျွန်မ ဆန္ဒတွေကိုပါ သိနေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်မမှာ ဘယ်အပေါက်ထဲကိုပဲ လီးဝင်ဝင် ကောင်းသော ဆိမ့်သော အရသာကို ခံစားရကြောင်း လက်တွေ့သိလိုက်ပြီမို့ ရုန်းကန်ရင်းဖြင့် အလိုးခံမယ့်အစား သူတို့အကြိုက်လိုက်ပြီး အလိုးခံရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဖွတ်မိုးကြီးက ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်လေးထဲ အဆုံးဝင်နေသော သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ကျွန်မ ဖင်ခေါင်းထဲမှာ ဟာကနဲဖြစ်သွားရသည်။ သူတို့တတွေ ဘယ်လိုပဲလိုးလိုး သူတို့လိုးသမျှ အံကြိတ်ခံမည်ဟူ၍ သဘောထားလိုက်သည့်ခဏမှာ ကျွန်မ၏ ကာမရမ္မက်သွေးဆိုးများ ထကြွပြင်းပြလာပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်မ၏ စောက်ပတ်ထဲမှာလည်း စစ်ကနဲ စစ်ကနဲဖြစ်ဖြစ်လာကာ ခံချင်စိတ်တွေက ထကြွလာသလို စောက်ရည်များက စိမ့်ထွက်လာပြန်ပြီဖြစ်သည်။ မိုးကြီးက ကျွန်မဖင်ကို လိုးစဉ်က ဖင်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးဝင်ပြီး မကြာခင်မှာပင် ကျွန်မမှာတချီပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်၍ သုက်ရည်များထွက်ကာ ပြီးသွားချိန်တွင် ကျွန်မမှာ ကောင်းနေဆဲဖြစ်လျက် မပြီးသေးပဲ ကာမဆန္ဒတွေမှာ တဆန့်ငင်ငင်ဖြစ်ကာ ကျန်ခဲ့ရလေသည်။ မမ..ဟင်.. ဘာလဲဟင်.. ဒီအတိုင်းဘဲ ကုန်းနေအုံးနော် အင်းပါ.. အင်း.. ရဲကျော်က ကျွန်မကို ယခုအနေအထားအတိုင်း ကုန်းလျှက်လေးဘက်ထောက်ထားရန် ပြောသဖြင့် ကျွန်မလည်းဆက်ပြီး လေးဘက်ထောက်ကုန်းထားရလေသည်။ ဆက်တိုက် ကြာကြာ လေးဘက်ထောက်ကုန်းထားရသဖြင့် ညောင်းလာမိသော်လည်း ကျွန်မမှာ ကာမအရသာ အသစ်အဆန်းကို ခံစားကြည့်ချင်သောကြောင့် ဆက်၍ပင် ဖင်ကုန်းလျှက် လေးဘက်ထောက်မြဲ ထောက်ထားခဲ့သည်။
ကျွန်မမှာ လေးဘက်ထောက်ထားလျှက်မှ ရဲကျော်တို့တတွေ ဘယ်လိုများလိုးကြဦးမှာလဲဟု ခေါင်းထောင်လျှက် လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်ရာ ကျွန်မ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်ခန္ဓာကို ဝိုင်းကြည့်နေကြသော သူတို့သုံးယောက်စလုံး၏ လီးတန်ကြီးများမှာ မာတောင်လျှက်နေတာကို တွေ့ရလေသည်။ ကျွန်မမှာ ရဲကျော်တို့သုံးယောက်စလုံး ဝိုင်းလိုးကြသည်ကို ခံရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရ၍ ကာမဆန္ဒရမ္မက်များ ပိုမိုပြင်းထန်ထကြွလာပြီဖြစ်သည်။ ထိုခဏမှာပဲ ကျော်မျိုးက ကျွန်မ၏ နောက်ရောက်လာပြီး ကျွန်မ၏ ဖင်သားကြီးများကို ဆွဲဖြဲ၍ ထွက်ပေါ်လာသော ဖင်ပေါက်ဝနီနီရဲရဲစူစူလေးဆီသို့ သူ၏လီးချောင်းကြီးကို တေ့၍ ညင်သာစွာသွင်းလိုက်သည်။ အရသာသိနေပြီဖြစ်သော ကျွန်မမှာ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို နောက်ပစ်လျှက် အံကြိတ်ပြီး ကျော်မျိုး၏ လီးတန်ကြီး ဝင်လာသည်ကို ခံလိုက်ရလေသည်။ ပြွတ်.. ဖွတ်.. ပြွတ်..အင့်.. အင်း.. အား.. အား.. အီး.. အီး.. အား.. မိုးကြီး လိုးထား၍ ဖင်ပေါက်ကျယ်နေသည့်အပြင် မိုးကြီး၏ သုက်ရည်များ ဖင်ပေါက်ထဲ၌ ရှိနေသဖြင့် ကျော်မျိုး၏ လီးတန်ကြီးမှာ တဆုံးဝင်သွားပြီး ကျော်မျိုးက ကျွန်မ၏ ဖင်သားအိအိကြီးများကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်းညှောင့်၍ လိုးနေလေသည်။ ပြွတ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. ပြွတ် ကျွန်မမှာ သွေးသားဆန္ဒများ ကြွတက်လာပြီး ရမ္မက်များထန်လာသောကြောင့် ညည်းညူမိလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျော်မျိုးက ကျွန်မ၏ ဖင်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးကို အဆုံးထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ကျွန်မကို ဆွဲဖက်ကာ ဘေးသို့လှိမ့်ချလိုက်ရာတွင် ကျွန်မမှာ သူ့အပေါ်မှ ထပ်လျှက်သားဖြင့် ပက်လက်လှန်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ကျော်မျိုး၏ လီးတန်ကြီးမှာ ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်ထဲတွင် ထိုးလျှက်သား တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေပြီး ကျွန်မပေါင်နှစ်ချောင်းမှာ ဘေးသို့ကားထွက်လာလေသည်။ ကျော်မျိုးက သူ၏ ခြေထောက်များနှင့် ကျွန်မ၏ ခြေထောက်များကို လိမ်ချိတ်လျှက် ပေါင်ကို ခပ်ကားကားဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားရာ ကျွန်မ၏ ပေါင်ကြားမှ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မို့မောင်းပြူထွက်လျှက် နေလေသည်။ ထိုအခါ မိုးကြီးက ကျွန်မ၏ ကားနေသော ပေါင်ကြားတွင် ဝင်၍ နေရာယူကာ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ကျွန်မ၏ စောက်ပတ်အဝဆီသို့ တေ့ကာ ဖိ၍ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။ပလွတ်. အား.. အား.. နာတယ်.. ဖြေးဖြေးသွင်း.. အား.. အား.. မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးမှာ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ဝဆီသို့တေ့၍ သွင်းလိုက်သော်လည်း ကျွန်မ၏ စောက်ဖုတ်မှာ ကော့ထောင်နေသဖြင့် မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးမှာ မဝင်ပဲနှင့် ကျွန်မစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကို လျှောတိုက်ထိုးခွဲကာ ကျွန်မ၏ စောက်စေ့ငုတ်တိုတိုလေးကိုပါ တွန်းတိုက်လျှက် ကန်ထွက်သွားသဖြင့် ကျွန်မမှာနာကျင်သွားရလေသည်။ မိုးကြီးက ကျွန်မအော်သံကို ဂရုမစိုက်တော့ပဲ သူ၏လီးတန်ကြီးကို အရင်းမှ ကိုင်ဆုပ်လိုက်ကာ အောက်သို့စိုက်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်ဝတွင် ထပ်မံတေ့၍ ဖိပြီးဒစ်ဝင်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
ပြီးမှ မိုးကြီးက သူ၏ ဖင်အားဖြင့်ဖိထိုးကာ လိုးလိုက်သဖြင့် လီးချောင်းကြီးမှာ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာလေသည်။ ထိုလီးတန်ကြီးမှာ ကျွန်မ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားနုနုများနှင့် စီးပိုင်စွာပွတ်တိုက်ထိတွေ့လေရာ ကျွန်မအနေဖြင့် နာကျင်ခံခက်ဖြစ်သွားရသည်။ မိုးကြီး၏ လီးတန်ကြီးမှာ ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲသို့ အဆုံးထိဝင်သွားပြီဖြစ်ရာ ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်ထဲသို့လဲ ကျော်မိုးကသူ့လီးချောင်းကြီးကို ထိုးသွင်းထားသဖြင့် အပေါက်နှစ်ပေါက်စလုံးကို လီးချောင်းကြီးများဖြင့် အလိုးခံနေရသောကြောင့် ကျွန်မမှာ ဘယ်လိုမှပြောမပြတတ်အောင် ခံစားနေရလေသည်။ ကျွန်မမှာ ဖင်ပေါက်ရော စောက်ပတ်ထဲကိုပါ လီးနှစ်ချောင်းနှင့် လိုးဆော်နေသဖြင့် အောင့်သလိုလို၊ နာသလိုလိုနှင့် အသည်းတအေးအေး၊ ကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထအောင် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် ကာမအရသာထူးကို ပီပီပြင်ပြင်ခံစားနေရသည်။ ကျွန်မမှာ လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ထဲ အဆင်ပြေအောင် လိုးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် ပေါင်ကို ပို၍ကားပေးလိုက်ပြီး ခါးကိုပါ ကော့ညွှတ်ပေးလိုက်သည့်အတွက် ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးတို့၏ လီးချောင်းကြီးနှစ်ချောင်းမှာ ကျွန်မ၏ ဖင်ပေါက်နှင့် စောက်ပတ်ထဲသို့ ကောင်းစွာဝင်ထွက်လိုးနိုင်ပါလေတော့သည်။ မိုးကြီးက စောက်ပတ်ထဲသို့ အဆုံးဝင်သွားသော သူ၏ လီးတန်ကြီးကို အသာပြန်ဆွဲနှုတ်လိုက် အသာလေးပြန်လိုးသွင်းလိုက်ဖြင့် လိုးပေးနေသလို ကျော်မျိုးကလည်း ဖင်ပေါက်ထဲသို့ သူ၏လီးချောင်းကြီးကို တေ့ကာ ကော့ကာ ထိုးတင်၍ လိုးပေးနေလေသည်။ ကျွန်မမှာ ဖင်ထဲရော စောက်ပတ်ထဲကိုပါ လီးနှစ်ချောင်းဖြင့် ဝင်ထွက်လိုးပေးနေသဖြင့် ဖင်ရော စောက်ပတ်မှာပါ အရသာတွေ့ပြီး ကျွန်မ၏ ကာမမီးတောက်မှာ ပြင်းထန်သည်ထက်ပြင်းထန်လာရပြီဖြစ်သည်။ အ.. အား.. အီး.. အီး.. အိုး.. အိုး. ထိုအချိန်မှာ ရဲကျော်က တစခန်းထလာလေတော့သည်။ ကျော်မျိုးနှင့် မိုးကြီးတို့ ကျွန်မ၏ ဖင်နှင့် စောက်ပတ်ကို လိုးနေသော အချိန်တွင် ရဲကျော်က ကျွန်မ၏ နို့အုံများ ကိုင်တွယ်ဆုပ်နယ်လျှက် နို့အုံကြီးများကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ယူလျက် နို့သီးခေါင်းများကို လျှာဖြင့် တို့ထိဝိုင်းပတ်ပေးနေတာဖြစ်သည်။ ကျော်မျိုးတို့နှစ်ယောက်က ကျွန်မ၏ ဖင်နှင့် စောက်ပတ်ကို လိုးတာအဆင်ပြေလောက်သော အချိန်တွင် ရဲကျော်က မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်မ၏ ကိုယ်ပေါ်ကို ခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြင့် ကျော်ခွပြီး ကျွန်မ၏ မျက်နှာဘက်ကို ကိုယ်လုံးလှည့်ထားလိုက်သည်။ ကျွန်မမှာ ရဲကျော်က ကျွန်မကိုယ်ပေါ်သို့ ခွကျော်လိုက်ချိန်တွင် မျက်စိမှိတ်လျက် ကာမအရသာကို ခံစားနေရာမှ သူဘာလုပ်မည်လဲဟူ၍ သိချင်သဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးက တရမ်းရမ်းနှင့် ကျွန်မမျက်နှာပေါ်သို့ဝဲနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
မမ.. မောင်လေး လီးကို စုပ်လိုက်.ရဲကျော်က ပြောလည်းပြောရင်း သူ၏လီးတန်ကြီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်၍ ကျွန်မ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီး ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ အု.. အု.ကျွန်မမှာ တခါဖူးမျှ လီးမစုပ်ဘူးခဲ့သဖြင့် ပထမတော့ ထိတ်လန့်သလိုလိုဖြစ်သော်လည်း ကာမဇောဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေသောကြောင့် မထူးတော့ပါဘူးဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ကာ သူ့လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းလာတာကို ခံယူလိုက်သည်။ သို့သော် ရဲကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက်၍သာ ဝင်သွားသော်လည်း ကုတင်ပေါ်တွင် အိပ်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ကျော်မျိုး၏ ကိုယ်ပေါ်မှာ ကျွန်မက ရောက်နေသဖြင့် လီးစုပ်ရတာ အဆင်မပြေသလို ဖြစ်နေရလေတော့သည်။ ကျွန်မမှာ ဘေးဘက်တွင် ရောက်နေသော လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်မြှောက်ကာ ရဲကျော်၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို တွယ်ထားလိုက်ပြီး ကျွန်မ၏ ခေါင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်ပြုလျှက်ရှိသော သူ၏လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်အောင် စုပ်ကာ နို့အေးချောင်းစုပ်သလို စုပ်ပေးနေမိပါသည်။ ပြွတ်.. ဖွတ်.. ပလွတ်.. စွပ်. အား.. အီး.. ကောင်း..တယ် မမရယ် အား.. ကောင်းလိုက်တာ ကျမတယောက်တည်းကို ရဲကျော်တို့သုံးယောက်က ဝိုင်းလိုးကြသည့်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကာမအရသာကို ခံစားနေရလေသည်။ တသက်လုံးထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည့် ကျမအသားစိုင်တွေက သူတို့စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ဆုတ်ညှစ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့က ကျမကို သူတို့သုံးယောက် အားမနာတမ်း တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးရအောင် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် လိုးကြဆော်လိုက်ကြသည်။ အလကားရသည့် ပစ္စည်းမို့ မညှာမတာ ပက်ပက်စက်စက် တီးလိုက်ကြလို့ ကျမ ဖွတ်ဖွတ်ကို ကြေသွားတာပါပဲ.. ရှင်တို့ရယ်။ တခါမှ လီးမစုပ်ဖူးခဲ့သည့်ကျမမှာ ထိုနေ့က လီးသုံးချောင်းလုံး စုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ ကျမ၏ ဖင်ပါကင်လေးကိုလည်း သူတို့ဘဲ ဖွင့်လိုက်ကြသည်။ စောက်ပတ်ကိုရော၊ ဖင်ပါ တပြိုင်နက် နှစ်ယောက်ညှပ်ပြီးလည်း ချကြသည်။ အကျုံးခံနေစဉ်က ကာမဆန္ဒတွေထကြွပြင်းထန်ပြီး အလိုးခံရတာကို ကျေနပ်မိသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် စဉ်းစားလေလေ၊ ယူကျုံးမရ မချိတင်ကဲနှင့် ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ရလေသည်။ သူတို့ဝိုင်းသမလိုက်ကြသဖြင့် ကျမမှာနောက်တနေ့တွင် စောက်ပတ်ရော ဖင်ထဲပါ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာနေရသောကြောင့် ကျောင်းမှခွင့်တပတ်ယူလိုက်ရသည်။ ဒီနေ့တော့ ကျမ ကုတင်ပေါ်လှဲနေရင်းက ကျမအဖြစ်ကိုပြန်မြင်ယောင်မိပြီး အလိုလိုကျိတ်မနိုင် ခဲမရဖြစ်နေရသည်။ သို့သော်လည်း ထိုနေ့က အားကောင်းမောင်းသန်ယောက်ျားသုံးယောက်က ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဗျင်း လိုက်တာကြောင့် ဘယ်လိုနဲ့မှမတူသော ကာမအရသာကို ကျမထူးကဲစွာဖြင့် တကယ်ကို အားရပါးရခံစားခဲ့ရသည်သာဖြစ်သည်။ ယခုရော စောက်ပတ်လေးများ ကျိန်းစပ်နေအုံးမလားဆိုပြီး လက်ဖြင့် ပေါင်ကြားမှ စောက်ဖုတ်ကြီးဆီသို့ လှမ်းပြီး စမ်းကြည့်မိသည်။
ကျမစောက်ပတ်လေးမှာ နာကျင်ခြင်းမရှိတော့သည့်အပြင် ပူနွေးပြီး တင်းကားဖောင်းမို့နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို စမ်းကြည့်မိသည့်ခဏဝယ် ကျမမှာ ဒေါသစိတ်များပျောက်ကွယ်သွားပြီး ကာမရမ္မက်များဖြစ်လာရတော့သည်။ ကျမမှာ ထမီပေါ်မှနေ၍ ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကို လက်ဖြင့် ထိကိုင်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ချိန်တွင်မတော့ ကျမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှာ ရှုံ့ချီပွချီဖြစ်လာတော့သည်။ သို့ကြောင့် ကျမ ထမီကို အသာလှန်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖဝါးဖြင့် အသာပွတ်ပေးလိုက်မိပါသည်။ ကျမမှာ ကိုယ့်လက်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ရုံဖြင့် အားမရတော့ပဲ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကို အထက်အောက် ပွတ်သပ်ဆွဲပေးလိုက်သည့်အခါ ရှိန်းမြမြဖြင့် အလိုးခံချင်စိတ်များ ပြင်းထန်လာတော့သည်။ သို့နှင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာကြားထဲမှနေ၍ လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပါသည်။ ကျမစောက်ခေါင်းထဲမှာ စောက်ရည်များ စိမ့်ထွက်ကာ စိုစွတ်နေပြီဖြစ်လေသည်ဟင့်.. ဟင့်.. ဟင့်.. အင်းကျမမှာ ထကြွလာသော ကာမစိတ်များကြောင့် ဒူးထောင်ပေါင်ကားအနေအထားဖြင့် မျက်လုံးများ စုံမှိတ်ကာ စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ညှိုးကို ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်ကာ မနားတမ်း ညည်းညူနေရလေသည်။ နို့ကိုလည်း လက်တဖက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်၍ ဆုပ်နယ်နေမိသည်။ ကျမဖြင့် ယခုဆိုလျှင် လီးတချောင်းချောင်းဖြင့် စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းပြီးလိုးပေးတာကို ခံချင်စိတ်တွေ မတရား ပြင်းပြနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် အိပ်ခန်းတံခါးပွင့်သွားပြီး လူတယောက်ဝင်လာသည်ကိုပင် ကျမမှာ မသိနိုင်လောက်အောင် နှာထန်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျမမှာ စောက်ပတ်ကို လက်ညှိုးနှင့်ကလိရင်း ကာမအရသာယူနေစဉ် ကျမလက်ကို လက်တဖက်က လာဆုပ်ကိုင်လိုက်သဖြင့် လန့်ပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ဟင်..မောင်လေး. မမ အရမ်း ခံ ချင်နေပြီမို့လား ဟင့်.အင်း.. ဟင့်အင်း.. မမရယ်.. မောင်လေးကလဲ မမ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးချင်နေတာပါ.. ဒီမှာ ကြည့်ပါအုံး မမရဲ့ အို.ရဲကျော်က ပြောပြောဆိုဆို သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သဖြင့် ပေါ်ထွက်လာသော လီးတန်ကြီးကို မြင်တွေ့လိုက်၇ာ အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။ အခုလို အချိန်မှာတော့ ရဲကျော်သာမဟုတ်.. ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဘဲလာလာ ကုန်းပစ်လိုက်ချင်သည့် ကျမစိတ်ကိုတော့ဖြင့် ကျမကိုယ်တိုင် နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်.. ပြီးပါပြီ။